Khadka Wax Soo Saarida Cajaladda - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Geeddi-socodka geeddi-socodka waxsoosaarka waxsoosaarka maqaarka oo dhammaystiran oo kaladuwan ayaa ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee Warshadaha culus ee Henan Zheng. Waxay ku siin kartaa xalal wax soo saar dhameystiran oo lagu kalsoonaan karo iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah ee macaamiisha.
Waxaan khibrad u leenahay qorsheynta iyo adeegga khadadka wax soo saarka bacriminta ee kala duwan. Waxaan kaliya diirada saareynin xiriir kasta oo geedi socodka wax soo saarka ah, laakiin sidoo kale marwalba waxaan kufahmi karnaa faahfaahinta geeddi-socod kasta oo ku saabsan dhammaan qadka wax soo saarka oo si guul leh loogu guuleysto isku-xirnaanta.
Khadka wax soo saarka ee granulator disk waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro bacriminta dabiiciga ah. Bacriminta dabiiciga ah waxaa laga samayn karaa xoolaha iyo digada digaagga, qashinka beeraha iyo qashinka adag ee dowladda hoose. Qashinkan dabiiciga ah wuxuu ubaahanyahay in lasiihafeeyo kahor intaan loobadalin bacriminta ganacsiga dabiiciga ah ee qiimaha ganacsiga iibka ah. Maalgashiga qashinka loogu beddelayo hantida gabi ahaanba waa mid qiimo leh.
Line-soo-saarka bacriminta bacriminta organic granulated wuxuu ku habboon yahay:
►Soo saarista digada lo'da Bacriminta dabiiciga ah
►Soosaarida bacriminta dabiiciga ah ee digada doofaarka
►Soosaarida digaag iyo digada bacriminta dabiiciga ah
►Soosaarka idaha ee soosaarida bacriminta dabiiciga ah
►Soo-saarista bacriminta dabiiciga ah ee qashinka magaalooyinka
1. digada xoolaha: digada digaaga, digada doofaarka, digada adhiga, digada lo'da, digada faraska, digada bakaylaha, iwm.
2. qashinka warshadaha: canab, khal khal, hadhaaga kasaafada, haraaga sonkorta, qashinka biogas, haraaga dhogorta, iwm.
5. dheecaanka: dhoobada magaalooyinka, dhoobada webiga, dhoobada filterka, iwm.
Khadka waxsoosaarka waxsoosaarka maqaarku waa mid horumarsan, hufan oo wax ku ool ah, qaab dhismeedka qalabka waa is haysta, otomatigga ayaa sarreeya, hawlgalkuna waa sahlan yahay, kaas oo ku habboon wax soo saarka ballaaran ee bacriminta dabiiciga ah.
1. Qalabka dusha u adkaysta iyo xirashada u adkaysta ayaa loo isticmaalaa dhammaan qalabka khadka wax soo saarka. Ma jiro seddex wasakhda qiiqa, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka. Waxay u socotaa si joogto ah waana sahlan tahay in la ilaaliyo.
2. Awoodda wax soosaarka waa la waafajin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Qaabka khadadka wax-soo-saarka oo dhami waa mid is haysta, saynis ah oo macquul ah, tiknoolajiyaduna waa mid horumarsan
Qalabka xariijinta waxsoosaarka waxsoosaarka maqaarka waxaa ka mid ah maaddada bakhaarka → blender (sirring) machine mashiinka granulation disk (granulator) machine mashiinka shaandheeyaha (kala sooca alaabada aan tayada lahayn ee alaabta la dhammeeyay) ku xirnaanta geedi socodka kala duwan).
Xusuusin: Khadkan wax soo saar waxaa loogu talagay oo kaliya.
Nidaamka socodka qadka wax soo saarka granulation disk badanaa waxaa loo qaybin karaa:
1. Nidaamka maaddooyinka ceeriin
Saamiga adag ee cayriin wuxuu xaqiijin karaa waxtarka bacriminta sare. Waxyaabaha ceyriinka ah waxaa ka mid ah saxarada xoolaha, midhaha qurmay, diirka, khudradda ceyriinka ah, bacriminta cagaaran, bacriminta badda, bacriminta beeraha, seddex qashin, sheybaarro iyo waxyaabo kale oo ceyriin ah.
2. Nidaamka isku qasida alaabta ceeriin
Dhammaan alaabta ceyriinka ah waa la isku qasan yahay oo si isku mid ah loogu walaaqaa isku darka.
3. Nidaam jabay
Qalabka burbura silsiladdu waxay jajabisaa qaybo waaweyn oo walxo ah qaybo yaryar oo buuxin kara shuruudaha kala-soocidda. Kadibna suunka gudbiyaha wuxuu u dirayaa maaddada mashiinka granulation disk.
4. Nidaamka kala-bixinta
Xagalka diskiga ee mashiinka granulation disk wuxuu qaataa qaab dhismeedka qaansoleyda, iyo heerka sameynta kubbadda ayaa gaari karta in ka badan 93%. Ka dib markay maadadu gasho saxanka granulation-ka, iyada oo loo marayo wareegga joogtada ah ee qalabka kala-baxa iyo qalabka lagu buufiyo, maaddada ayaa si siman isugu xidhan si loo soo saaro qurubyo leh qaab isku mid ah iyo qaab qurux badan.
5. Nidaamka baaritaanka
Waxyaabaha la qaboojiyey waxaa loo qaadaa mashiinka shaandhada shaandhada ee baaritaanka. Alaabooyinka u qalma waxay ka geli karaan bakhaarka dhammaaday iyagoo maraya suunka gudbiyaha, sidoo kale si toos ah ayaa loo soo duubi karaa. Qurub aan u qalmin ayaa ku soo laaban doona si ay dib ugu soo noqdaan.
6. Habka baakadka
Baakadaha waa habka ugu dambeeya ee khadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah. Shayga la dhammeeyay waxaa lagu xiraa mashiin baako buuxa oo otomaatig ah. Darajada sare ee otomaatiga iyo waxtarka sare ma aha oo kaliya inay gaaraan miisaam sax ah, laakiin sidoo kale si heer sare ah ayey u dhammaystiraan geedi socodka ugu dambeeya. Isticmaalayaasha ayaa xakameyn kara xawaaraha quudinta waxayna dejinayaan xuduudaha xawaaraha iyadoo loo eegayo shuruudaha dhabta ah.